Shirkadaha guryaha Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Shirkadaha guryaha gudaha North Hollywood
Shirkadaha guryaha gudaha California
Waxa daabacay Modern Bathroom
arag Shirkadaha guryaha la daabacay 2 weeks ago
Waxa daabacay SK Designer Living
arag Shirkadaha guryaha la daabacay 8 months ago
Waxa daabacay Anonymous
arag Shirkadaha guryaha la daabacay 3 years ago
Alaabta guriga waxaa loola jeedaa alaabada dhaqdhaqaaqa ee loogu talagalay in lagu taageero howlaha kala duwan ee aadanaha sida fadhiga (tusaale, kuraasta, saxarada, iyo fadhiga), cunista (miisaska), iyo hurdada (tusaale, sariiraha). Alaabta guriga ayaa waliba loo isticmaalaa inay ku qabtaan ashyaa'da dhererka ku habboon ee shaqada (sida sagxadaha dhulka dushiisa ka sarreeya, sida miisaska iyo miisaska), ama in lagu keydiyo waxyaabo (tusaale ahaan, armaajooyinka iyo armaajo). Qalabka guryuhu wuxuu noqon karaa wax soo saar naqshadeed waxaana loo arkaa inuu yahay nooc farshaxan oo qurxin ah. Marka lagu daro doorka firfircoon ee alaabta guriga, waxay u adeegi kartaa sumad ama ujeedo diineed. Waxaa laga samayn karaa agab badan, oo ay ku jiraan bir, caag, iyo alwaax. Alaabta guriga waxaa lagu samayn karaa iyadoo la adeegsanayo noocyo kaladuwan oo alwaax alwaax ah oo badanaa ka tarjumaya dhaqanka deegaanka.